သားနှဈယောကျ မိခငျဖွဈတာမို့ ကဆြုံးသှားတဲ့ သူရဲကောငျး တှေ ရဲ့ မိဘတှေ ကိုယျစား အရမျး ဝမျးနညျး ကိုယျခငျြးစာ ခံစားမိတယျ ဆိုတဲ့ ဇငျဇငျဇျောမွငျ့ – GaMone Media
Homepage / Celebrity / သားနှဈယောကျ မိခငျဖွဈတာမို့ ကဆြုံးသှားတဲ့ သူရဲကောငျး တှေ ရဲ့ မိဘတှေ ကိုယျစား အရမျး ဝမျးနညျး ကိုယျခငျြးစာ ခံစားမိတယျ ဆိုတဲ့ ဇငျဇငျဇျောမွငျ့
သားနှဈယောကျ မိခငျဖွဈတာမို့ ကဆြုံးသှားတဲ့ သူရဲကောငျး တှေ ရဲ့ မိဘတှေ ကိုယျစား အရမျး ဝမျးနညျး ကိုယျခငျြးစာ ခံစားမိတယျ ဆိုတဲ့ ဇငျဇငျဇျောမွငျ့
By Ga MonePosted on March 14, 2021 March 14, 2021
ပရိသတျကွီးရေ.. အနုပညာလောကမှာ ထူးခွား လှပတဲ့ မကျြဝနျးတဈစုံကို ပိုငျဆိုငျထားပွီး ပရိသတျတှကွေားအရမျးကိုရပေနျးစားအောငျမွငျခဲ့သလို ဇာတျကားတှလေညျး ရိုကျကူးထားသူလေးကတော့ သရုပျဆောငျဇငျဇငျဇျောမွငျ့ပဲ ဖွဈပါတယျ..။ ဇငျဇငျဇျောမွငျ့ကတော့ လတျတလောအခွအေနတှေနေဲ့ ပတျသကျပွီး ပွညျသူတှေ နဲ့အတူ ရပျတညျနသေလို သားနှဈယောကျမိခငျဖွဈတာမို့ ကဆြုံးသှားတဲ့ သူရဲကောငျးတှရေဲ့မိဘတှကေိုယျစား အရမျးဝမျးနညျးကိုယျခငျြးစာ ခံစားမိတဲ့အကွောငျးလေး ပွောပွလာပါတယျ..။ ပွညျသူတှဝေမျးနညျးနရေသလို သူမကိုယျတိုငျကလညျး ဝမျးနညျး ကွကှေဲနရေတဲ့ အကွောငျးလေးတှနေဲ့ ကဆြုံးသှားတဲ့သူရဲကောငျးလေးတှအေတှကျ ယူကွုံးမရဖွဈရတဲ့ အကွောငျးလေးတှကေို ဒီကနမှေ့ာကရြောကျတဲ့ သားဖွဈသူရဲ့ မှေးနဆေု့တောငျးလေးနဲ့အတူ ပွောပွထားတာပါ..။
“ဒီနေ့ က မလေေးရဲ့သားကွီးလေး အောငျကြျောကြျောပိုငျ @kyaw kyaw လေး၁၁ နှဈ ပွညျ့မှေးနဖွေ့ဈပါတယျ. သားကွီးလေးရဲ့ မှေးနမှေ့ာ နစေ့ဉျလဲ ကုသိုလျပွုနသေလို ပဲ ဒီနမှေ့ာလဲ လှု ဒါနိးကုသိုလျ ယူခဲ့ပါတယျ .သားကွီးမှေးနေ့ မှာ သားကွီးက မလေေးတို့ကိုကနျတော့တော့ လေးနကျတဲ့ဆုလေးတှပေဲ ပေးခဲ့ပါတယျ . သားကွီးလေး ရဲ့ဘဝ့ မှာ အကွငျနာတရားရှိသော , လူ ပီသ သော , အားကွီးတိုငျး အနိုငျမကငျြ့သော, မုသားမသုံးသော, ငါးပါးသီလမွဲသော ,ငဲ့ညှာ ပွီး တကိုယျကောငျးစိတျမရှိသော, တာဝနျသိသော , ကိုယျကြိုးမငဲ့ သော အမြားအမှနျ ခှဲခွားနိုငျစှမျး ရှိပွီး အမှနျတရားဘကျက ကိုယျကြိုးမငဲ့ပဲရပျတညျရဲသော မိဘ လူမြိုး တိုငျးပွညျနဲ့ ကိုယျကငျြ့သိက်ခာပွညျ့စုံ ပွီး အသကျရှညျတဲ့သားကောငျးလေးဖွဈပါစေ လို့ ပွုသမြှထူးမွတျတဲ့ ကုသိုလျတှနေဲ့သစ်စာ ဆို ဆုတောငျးပေးပါတယျ . သားကွီးလေး ဖွဈခငျြတဲ့ဆု မွတျဆုကောငျး မှနျသမြှ တောငျးတတိုငျးပွညျ့ဝပွီးအသကျရှညျပါစေ . ဒီနေ့ က သားကွီးမှေးနမေို့ အမှတျတရနောကျနှဈအမှတျတရပွနျပျေါလာအောငျတငျတာပါ . နိုငျငံသူနိုငျငံသားတှဝေမျးနညျး နခြေိနျမို့ မလေေးကိုယျတိုငျလဲဝမျးနညျးကွကှေဲနရေလို့ဘာဓာတျပုံ မတငျတာပါ ရှငျ .
မလေေး လဲ သားနှဈယောကျရဲ့မိခငျဆိုတော့ နိုငျငံသူ နိုငျငံသားတှေ နဲ့ထပျတူ ကဆြုံးသှားသူမြားရဲ့ မိခငျတှေ ကိုယျစား အရမျးဝမျးနညျး ကိုယျခငျြးစာမိခံစားရပါတယျ . မလေေး နစေ့ဉျပွုတဲ့ကုသိုလျကောငျးမူ့ရော , ဒီနသေ့ားကွီးလေး ရဲ့မှေးနမှေ့ာပွုတဲ့ကုသိုလျထူးတှကွေောငျ့အားလုံးကနျြးမာခမျြးသာ အနာရောဂါ ကငျးဝေး ဘေးရနျ ကငျးစိတျခမျြးသာပွီး အားလုံးလိုခငျြတဲ့ ဆုအမွနျဆုံးပွညျ့ဝကွပါစသေား . နိုငျငံသူနိုငျငံသားအားလုံး မလေေးတို့မိသားစု အပါအဝငျကောငျးမှနျစှာ အိပျစကျကောငျးမှနျစှာနိုးထလာပွီး စိတျခမျြးမွရေ့တဲ့ ဘဝတှေ ပြျောရှငျစှာ သှားလာရဲ တဲ့ဘဝတှအေမွနျဆုံးရကွပါစသေား . မလေေးတို့မိသားစုကလဲအားလုံးနဲ့ထပျတူပါပဲ. နိုငျငံသူနိုငိငံသားမြားအားလုံး အသကျဘေး အကပျြအတညျးဒုက်ခဝဠျကွှေး ကငျးဝေးအခြုပျအနှောငျအကပျြအတညျးမှ ကငျးဝေးပွီး လိုရာပွညျ့ အောငျကွပါစလေို့ မလေေး ရဲ့သားကွီးမှေးနမှေ့ာ ကုသိုလျပွုသစ်စာဆိုဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျရှငျ😍😍😍🙏🙏🙏 ဇငျဇငျဇျောမွငျ့ ၁၄ . ၃ . ၂၀၂၁ SUNDAY..” ဆိုပွီး ဆုတောငျးစကားလေးတှေ နဲ့အတူ ရေးသား ပွောပွထားတာ ဖွဈပါတယျ..။
Photo Credit – Zin Zin Zaw Myint’s Fb Acc
ပရိသတ်ကြီးရေ.. အနုပညာလောကမှာ ထူးခြား လှပတဲ့ မျက်ဝန်းတစ်စုံကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ပရိသတ်တွေကြားအရမ်းကိုရေပန်းစားအောင်မြင်ခဲ့သလို ဇာတ်ကားတွေလည်း ရိုက်ကူးထားသူလေးကတော့ သရုပ်ဆောင်ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်..။ ဇင်ဇင်ဇော်မြင့်ကတော့ လတ်တလောအခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူတွေ နဲ့အတူ ရပ်တည်နေသလို သားနှစ်ယောက်မိခင်ဖြစ်တာမို့ ကျဆုံးသွားတဲ့ သူရဲကောင်းတွေရဲ့မိဘတွေကိုယ်စား အရမ်းဝမ်းနည်းကိုယ်ချင်းစာ ခံစားမိတဲ့အကြောင်းလေး ပြောပြလာပါတယ်..။ ပြည်သူတွေဝမ်းနည်းနေရသလို သူမကိုယ်တိုင်ကလည်း ဝမ်းနည်း ကြေကွဲနေရတဲ့ အကြောင်းလေးတွေနဲ့ ကျဆုံးသွားတဲ့သူရဲကောင်းလေးတွေအတွက် ယူကြုံးမရဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းလေးတွေကို ဒီကနေ့မှာကျရောက်တဲ့ သားဖြစ်သူရဲ့ မွေးနေ့ဆုတောင်းလေးနဲ့အတူ ပြောပြထားတာပါ..။
“ဒီနေ့ က မေလေးရဲ့သားကြီးလေး အောင်ကျော်ကျော်ပိုင် @kyaw kyaw လေး၁၁ နှစ် ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်. သားကြီးလေးရဲ့ မွေးနေ့မှာ နေ့စဉ်လဲ ကုသိုလ်ပြုနေသလို ပဲ ဒီနေ့မှာလဲ လှု ဒါနိးကုသိုလ် ယူခဲ့ပါတယ် .သားကြီးမွေးနေ့ မှာ သားကြီးက မေလေးတို့ကိုကန်တော့တော့ လေးနက်တဲ့ဆုလေးတွေပဲ ပေးခဲ့ပါတယ် . သားကြီးလေး ရဲ့ဘဝ့ မှာ အကြင်နာတရားရှိသော , လူ ပီသ သော , အားကြီးတိုင်း အနိုင်မကျင့်သော, မုသားမသုံးသော, ငါးပါးသီလမြဲသော ,ငဲ့ညှာ ပြီး တကိုယ်ကောင်းစိတ်မရှိသော, တာဝန်သိသော , ကိုယ်ကျိုးမငဲ့ သော အများအမှန် ခွဲခြားနိုင်စွမ်း ရှိပြီး အမှန်တရားဘက်က ကိုယ်ကျိုးမငဲ့ပဲရပ်တည်ရဲသော မိဘ လူမျိုး တိုင်းပြည်နဲ့ ကိုယ်ကျင့်သိက္ခာပြည့်စုံ ပြီး အသက်ရှည်တဲ့သားကောင်းလေးဖြစ်ပါစေ လို့ ပြုသမျှထူးမြတ်တဲ့ ကုသိုလ်တွေနဲ့သစ္စာ ဆို ဆုတောင်းပေးပါတယ် . သားကြီးလေး ဖြစ်ချင်တဲ့ဆု မြတ်ဆုကောင်း မှန်သမျှ တောင်းတတိုင်းပြည့်ဝပြီးအသက်ရှည်ပါစေ . ဒီနေ့ က သားကြီးမွေးနေ့မို့ အမှတ်တရနောက်နှစ်အမှတ်တရပြန်ပေါ်လာအောင်တင်တာပါ . နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဝမ်းနည်း နေချိန်မို့ မေလေးကိုယ်တိုင်လဲဝမ်းနည်းကြေကွဲနေရလို့ဘာဓာတ်ပုံ မတင်တာပါ ရှင် .
မေလေး လဲ သားနှစ်ယောက်ရဲ့မိခင်ဆိုတော့ နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားတွေ နဲ့ထပ်တူ ကျဆုံးသွားသူများရဲ့ မိခင်တွေ ကိုယ်စား အရမ်းဝမ်းနည်း ကိုယ်ချင်းစာမိခံစားရပါတယ် . မေလေး နေ့စဉ်ပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမူ့ရော , ဒီနေ့သားကြီးလေး ရဲ့မွေးနေ့မှာပြုတဲ့ကုသိုလ်ထူးတွေကြောင့်အားလုံးကျန်းမာချမ်းသာ အနာရောဂါ ကင်းဝေး ဘေးရန် ကင်းစိတ်ချမ်းသာပြီး အားလုံးလိုချင်တဲ့ ဆုအမြန်ဆုံးပြည့်ဝကြပါစေသား . နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံး မေလေးတို့မိသားစု အပါအဝင်ကောင်းမွန်စွာ အိပ်စက်ကောင်းမွန်စွာနိုးထလာပြီး စိတ်ချမ်းမြေ့ရတဲ့ ဘဝတွေ ပျော်ရွှင်စွာ သွားလာရဲ တဲ့ဘဝတွေအမြန်ဆုံးရကြပါစေသား . မေလေးတို့မိသားစုကလဲအားလုံးနဲ့ထပ်တူပါပဲ. နိုင်ငံသူနိုငိငံသားများအားလုံး အသက်ဘေး အကျပ်အတည်းဒုက္ခဝဠ်ကြွေး ကင်းဝေးအချုပ်အနှောင်အကျပ်အတည်းမှ ကင်းဝေးပြီး လိုရာပြည့် အောင်ကြပါစေလို့ မေလေး ရဲ့သားကြီးမွေးနေ့မှာ ကုသိုလ်ပြုသစ္စာဆိုဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်😍😍😍🙏🙏🙏 ဇင်ဇင်ဇော်မြင့် ၁၄ . ၃ . ၂၀၂၁ SUNDAY..” ဆိုပြီး ဆုတောင်းစကားလေးတွေ နဲ့အတူ ရေးသား ပြောပြထားတာ ဖြစ်ပါတယ်..။
Previous post သဲအိတျ သယျရငျး ဖုနျး အနှိုကျ ခံလိုကျရတဲ့ ကလေး ကို သပိတျက လူတှေ က ဖုနျးပွနျ ဝယျပေးခဲ့ …
Next post တရုတျ နဲ့ အမရေိကနျ မဟာမိတျ တှေ ဘယျသူတှကေ မွနျမာ့ အရေး အပျေါမှာ အသာစီး ရသှား နိုငျမလဲ…?